ပရိသတ်တွေက သူမကို လွမ်းရောလွမ်းနေကြရဲ့လားဆိုပြီး မေးခွန်းလေး မေးခဲ့တဲ့ သံသာမိုးသိမ့် – Suehninsi
ပရိသတ်တွေက သူမကို လွမ်းရောလွမ်းနေကြရဲ့လားဆိုပြီး မေးခွန်းလေး မေးခဲ့တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်
သံသာမိုးသိမ့်ကတော့ MRTV-4ရဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကနေ အောင်မြင်လာတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာဆိုရင် “ပျားရည်အိုင်၊ အချစ်ဖွဲ့လေညင်း…. အစရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုလည်း
မမှားလောက်ပါဘူး။ သံသာမိုးသိမ့်ကတော့ လတ်တလောမှာ ကြော်ငြာလေးတွေကို ရိုက်ကူးနေတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အချစ်ဖွဲ့လေညင်းဇာတ်လမ်းတွဲလေးပြီးသွားပေမယ့် ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ်အောင် ချောမောလှပလွန်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ
တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သံသာမိုးသိမ့်က“ဒီနေ့ကတော့ Bio Oil TVCလေးပါ မိန်းကလေးတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပဲနော် အော်ပြီးတော့ မိန်းကလေးအတွက်လည်း မရှိမဖြစ်ပဲ ဒါနဲ့ မိန်းကလေးကိုလွမ်းလား”လို့ဆိုပြီး သူမရဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေး ပရိသတ်တွေကကော
သတိရလွမ်းဆွတ်နေလားလို့မေးလိုက်ရင်းနဲ့ ချောမောလှပလွန်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့လွမ်းနေကြလားလို့မေးခွန်းလေးကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးကလည်း သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ မေးခွန်းလေးကို ဖြေပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။
သံသာမိုးသိမျ့ကတော့ MRTV-4ရဲ့ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကနေ အောငျမွငျလာတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူမရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှဟောဆိုရငျ “ပြားရညျအိုငျ၊ အခဈြဖှဲ့လညေငျး…. အစရှိတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှရေဲ့ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဆိုလညျး
မမှားလောကျပါဘူး။ သံသာမိုးသိမျ့ကတော့ လတျတလောမှာ ကွျောငွာလေးတှကေို ရိုကျကူးနတောကိုလညျး တှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့သရုပျဆောငျထားတဲ့ အခဈြဖှဲ့လညေငျးဇာတျလမျးတှဲလေးပွီးသှားပမေယျ့ ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျမပွတျအောငျ ခြောမောလှပလှနျးတဲ့ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ
တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ သံသာမိုးသိမျ့က“ဒီနကေ့တော့ Bio Oil TVCလေးပါ မိနျးကလေးတှအေတှကျ မရှိမဖွဈပဲနျော အျောပွီးတော့ မိနျးကလေးအတှကျလညျး မရှိမဖွဈပဲ ဒါနဲ့ မိနျးကလေးကိုလှမျးလား”လို့ဆိုပွီး သူမရဲ့ ကွျောငွာရိုကျကူးရေး ပရိသတျတှကေကော
သတိရလှမျးဆှတျနလေားလို့မေးလိုကျရငျးနဲ့ ခြောမောလှပလှနျးတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားဖျောပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ သံသာမိုးသိမျ့ရဲ့လှမျးနကွေလားလို့မေးခှနျးလေးကို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ပရိသတျကွီးကလညျး သံသာမိုးသိမျ့ရဲ့ မေးခှနျးလေးကို ဖွပေေးခဲ့ကွပါအုံးနျော။
Soure : Than Thar Moe Theint’s Facebook
ခမ်းနားလှပတဲ့ အိမ်အသစ်တက်ပွဲလေးကို သစ်တံခါးဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်ကြွရောက်ခဲ့တာကြောင့် ပျော်နေတဲ့ မေကဗျာ
အနုပညာအလုပ်တွေ မလုပ်ရတဲ့အချိန် ခေါက်ဆွဲသုတ်ရောင်းတာ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်း
ဖေစ့်ဘုတ် ဆယ်လီ နေဆန်းနဲ့အတူ ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ စုံတွဲသီချင်းလေး ရိုက်ကူးနေတယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို
မိခင်ဖြစ်သူ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပေမယ့် ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတာကြောင့် ပျော်နေတဲ့ ခင်ဘုဏ်း